လူမှုကွန်ယက်များကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာမည်သို့အသုံးပြုနည်း - Style with Men | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
လူမှုကွန်ယက်များကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲ, ငါတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ယနေ့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ အထူးသဖြင့်ကလေးသူငယ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာကိစ္စရပ်တစ်ခုတွင်လူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ဤနည်းပညာတိုးတက်မှုကိုသူတို့အလေးထားသည်။ တစ် ဦး သိမြင် - အပြုအမူလုပ်ရပ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေသူတို့ကိုတားဆီး စုစုပေါင်းပုံမှန်အတူ။
နောက်ထပ်သွားစရာမလိုဘဲဤအရာသည်ကလေးများသာမက၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်သာရပ်တန့်သွားသည် သူတို့သည်လူမှုရေးကွန်ရက်များကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏စွဲလမ်းမှုကိုတိုးပွားစေသည် နှင့်လုံခြုံသောကိုင်တွယ်လမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိဘဲ။ ဒါ စွဲလမ်းမှု၊ မှီခိုမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်ချက်အဖြစ်အမြစ်တွယ်ဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်အပေါငျးတို့သရိုးရှင်း။
2 ဘယ်အချိန်မှာ "စွဲ" အဖြစ်ဖော်ပြသလဲ?
4 လူမှုမီဒီယာစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားရန်သိကောင်းစရာများ -
လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်အကြောင်းပြောသောအခါ Facebook၊ Twitter, Instagram သို့မဟုတ် WhatsApp ကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများသည်သတိရလာလိမ့်မည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုအသုံးပြုကြသည် အကျွမ်းတဝင်ရှိသူများသို့မဟုတ်မသိသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အုပ်စုများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ဤမီဒီယာကိုအသုံးပြုကြသည် ထို့ကြောင့်သူတို့၏ဆက်သွယ်မှုသည်နေ့စဉ်ဖြစ်သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာဤအမျိုးအစားတွင်မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုကိုပညာပေးခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဖြစ်သောကြောင့်အရေးကြီးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင်လျင်မြန်စွာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကြောင့်လူအများအပြားမှထိုစည်းကမ်းမရှိကြပါ။
ဘယ်အချိန်မှာ "စွဲ" အဖြစ်ဖော်ပြသလဲ?
ကျနော်တို့က၎င်း၏ကိုင်တွယ်ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနေလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မပြုစေခြင်းငှါ, \_ t ရေရှည်တွင်အကောင်းမဖြစ်နိူင်သောစွဲလမ်းမှုသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်သင်ရုံသာသိရန်လိုသည်။
သင်နိုးသောအခါပထမ ဦး ဆုံးအရာလုပ်ပါ သင်၏လူမှုကွန်ယက်များကိုသတင်းအတွက်စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
သင်တစ်နေ့တာ၏အွန်လိုင်းအများစုတွင်နေမည်။ ဤလုပ်ရပ်များသည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုအဆက်မပြတ်မွမ်းမံခြင်း၊ မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသားထားသောအပြုအမူများမှတဆင့်လူတို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအပါအ ၀ င်သင်၌ဖြစ်ပျက်သမျှကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ဖြစ်သည်။
သင်သည်သူတစ်ပါး၏ဘဝကိုအဆက်မပြတ်လေ့လာပြီးယင်းနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်နှိုင်းယှဉ်သည်၊ ကျေနပ်လောက်စရာမကောင်းဘူးလို့ထင်နေတယ်။ အားလုံးနီးပါးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောအရာတိုင်းတွင်သင်တက်တက်ကြွကြွရှိနေသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးသည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တင်ပြသည် "စွဲ"အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည် ပုံမှန်အလုပ်တွေရဲ့အချိန်ကိုလျှော့ချပါ။ သင်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ကာယရေးအရအချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ အစာစားခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှန်ကန်သောနှင့်ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုစုပ်ယူ မိမိအသာမန်နေ့ရက်ကာလ၌လူတစ် ဦး ၏။ ဤလူမှုကွန်ယက်များ၏အလွဲသုံးစားမှုသည်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးကိုအထီးကျန်ဖြစ်စေပြီးစိတ် ၀ င်စားမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤအချက်သည်မြီးကောင်ပေါက်များကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မည်သူမဆိုအားတူညီသောအားနည်းချက်ဖြင့်ဟောပြောရန် ဦး ဆောင်နိုင်သည် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခ ဖန်တီးပြီးနှိုးဆော်ခြင်း သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်များအတွက်ထကြွလွယ်သော, သင်ပင်နိုင်ပါတယ် နိမ့်လူရဲ့စိတ်ပျက်, ကောင်းစွာရင်ဆိုင်ရသို့မဟုတ် channel ကိုနိုင်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ အဆိုပါမကြိုက်သို့မဟုတ်အားကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှု.
အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများတွင်ဤမှီခိုမှုသည်လူများ၏ကန့်သတ်မှုကိုတွန်းပို့ပေးသည့်အထူးသဖြင့်အချိန်အခါများရှိသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုလျော့နည်းသွားစေရန်အလွန်အမင်းရှက်ကြောက်ခြင်းခံရသည်။ ၄ င်းတို့တွင်မှန်ကန်သောလူမှုရေးသို့မဟုတ်မိသားစုဘဝမရှိပါ ဒါဟာစိတ်ကျရောဂါ၏ဖြစ်စဉ်များမျက်နှာသာ။
အခြေခံအားဖြင့်သင့်ဖုန်းကိုအနားယူထားပါ။ သင်အလွယ်တကူမသုံးနိုင်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဆက်လက်၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများကိုလက်ခံနိုင်သော်လည်းအဓိကအနေနှင့်အင်တာနက်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဤသည်အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခက်ခဲသည်, သို့သော်သင်တတ်နိုင်သမျှ အသိပေးချက်များလက်ခံခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာမှထွက်ပါ ဒါမှမဟုတ်တုန်ခါမှုတွေ (သို့) အနည်းဆုံးတော့တိတ်ဆိတ်သွားအောင်လုပ်ပါ။
သငျသညျရပါမည် မိုဘိုင်းကိုသတိပြုမိရန်ကတိကဝတ်ကိုခေတ္တရပ်တန့်စေသောအချိန်ကိုရှာဖွေပါနှင့်ဤအချိန်ပို။ ပို။ ကြာရှည်နေကြသည်။ သင်ကွန်ယက်များနှင့်အဆက်အသွယ်မပြုဘူးဟုမည်သူမျှမပြောသော်လည်း၊ အရင်ကဲ့သို့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းလိုက်လုပ်ရန်သင်ရှောင်ရှားရမည်
အချို့သောအချိန်များ၌သင်၏ကွန်ရက်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါက၊ သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုသတိထားမိခြင်း၊ ဓါတ်ပုံများကိုမွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးတွင်အမြဲတမ်းပါ ၀ င်ခြင်းအပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိပါ။
ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ ရုပ်မြင်သံကြားမှရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စီးရီးများရှာဖွေခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ အားကစားပြုလုပ်ခြင်း၊ တူရိယာကစားခြင်းသို့မဟုတ်သင့်အားလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့်ထိုလှုပ်ရှားမှုအားလုံး၏စာရင်းကိုပင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့်တွင်သင်တွေ့ရှိနိုင်သောအပြုသဘောဆောင်သည့်အရာတစ်ခုသေချာသည် ဒီအတွေ့အကြုံသစ်၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » နည်းပညာ » လူမှုကွန်ယက်များကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း